Android 5.0 hurdiga ah Data Recovery - Ladnaansho Xogta laga Android hurdiga ah
> Resource > Android > Android 5.0 hurdiga ah Data Recovery - Ladnaansho fariimaha qoraalka, Xiriirada iyo Photos
Android 5.0 hurdiga ah Data Recovery - Ladnaansho fariimaha qoraalka, Xiriirada iyo Photos Mararka qaarkood, marka ay akhrinayaan goosin ka mid ah farriin qoraal ah, ama arkaysid sawir, kac ahayn u aad tirtirto laga yaabaa in aan wax ogeysiin ah. Waxa aanu jeclaan kombiyuutarka in aad qaban karto hoos u Contrl iyo Z (Command iyo Z on Mac) si aad u joojiso tirtirka. On telefoonka aad Android, marka aad ula kac ahayn tirtirto xogta ama Android 5.0 shil samaynta xogta aad ka maqan, ma jirto hab inuu ka soo kabsado xogta aad tirtiray ama lumay oo aan kaalmo ee Android lagu Data Recovery. Maqaalkani waxa uu aad ugu fiican soo bandhigay Androdi 5.0 hurdiga ah Data Recovery inuu ka soo kabsado tirtiray ama fariimaha qoraalka ah, xiriirada iyo sawiro laga badiyay telefoonada aad Android iyo kiniiniyada.
Tani Android hurdiga ah Data Recovery waa Wondershare Dr.Fone for Android (kabashada xogta Android) . Waa # 1 kabashada xogta software adduunka ee loogu talagalay dadka isticmaala inuu ka soo kabsado tirtiray ama laga badiyay telefoonada Android iyo kiniiniyada. Haddii aad qabto wax xog maqan ee Android aad 5.0 qalab, aad isku dayi kartaa inuu ka soo kabsado xogta la talaabooyin yar oo sahlan.
Tallaabada 1. Download iyo rakibi Android ah 5.0 Data Recovery
Tani Android 5.0 Data Recovery waa aalad desktop ah, sidaa darteed waa in aad ka soo dejisan oo ku xidh on your computer. Ka dib markaas, u isticmaalaan cable ee digital in ay ku xidhmaan aad Android 5.0 telefoonka ama kiniin la your computer.
Tallaabada 2. sahlo debugging USB
Haddii aadan awood u debugging USB on Android aad 5.0 qalabka, weeyna ahayd inaad raacdo waxa hurdiga ah ee Android Data Recovery inaad sameyso sheegayaa. Waxaa bandhigayaa talaabooyinka si ay awood debugging USB on qalab aad ka. Haddii aad karti debugging USB hore, ka dibna u gudub talaabada tan.
Tallaabada 3. ha Android ah 5.0 Data Recovery falanqeeyaan qalab aad
Ka dib markii aan ogaanno qalab aad si guul leh, hurdiga ah ee Android Data Recovery falanqeeyaan doonaa qalab aad. Waxay qaadataa dhowr ilbiriqsi.
Tallaabada 4. noocyada file Select in iskaan
Si loo badbaadiyo waqtiga aad, weeyna u maleeyeen in aad dooratid nooc file in iskaan. In uu furmo, hubi nooca file aad u baahan tahay oo guji 'Next'. Nooca file waxaa ka mid ah sawir, video, fariin, xiriirada, qoraal, farriina WhatsApp iyo lifaaqa. In uu furmo suuqa soo socda, waxaad dooran kartaa "Sawirka u files tirtiray 'ama' Sawirka ee dhammaan faylasha '. Waxay ku xiran tahay sida aad u lumin xogta.
Tallaabada 5. Kulanka Xiisaha Leh ceshan xogta
Daaqadda natiijada, dhammaan faylasha helay waxaa lagu soo bandhigaa. Waxaad riix kartaa nooca faylka si ku eegaan dhammaan faylasha hoos this category dhankiisa midigta. Marka go'aansaday inuu ka soo kabsado faylasha, fiiri oo guji 'Ladnaansho'. Taasi waa!
Waa quruxsan fudud si ay u isticmaalaan, sax? Waa maxay sababta aan kala soo bixi version maxkamadda hadda!